Iibhulukhwe zokubaleka, ibhulukhwe yeYoga, T Shirts zokuQinisekisa, ibhulukhwe yeJogger, iBra yoBuqe - AIKA
AIKA Apparel Co,.Ltd ibekwe kwisiXeko saseDongGuan, kwiPhondo laseGuangdong.SinguMenzi weempahla zezemidlalo ze-OEM onamava angaphezu kweminyaka eli-10.Umgangatho ophezulu, iNkonzo ePhakamileyo, iNdlela yokuSebenza ngokuPhakamileyo yinkcubeko yethu yefektri ephambili .Sizikhethekileyo kwi-Yoga Wear, iiTracksuits, i-T Shirts, iifutshane kunye nokunye.
jonga lonke iqela
OEM Workout Soft Cotton Custom Logo Side Tie Pl...
IiNdlela ezine zokuzolula uMzimba ziQinisa esinqeni esiphakamileyo ...
Amanenekazi akuMgangatho oPhakamileyo atyhala iYoga Bra ngokweSiko Adj...
Amanenekazi eNdlela eZine zolule iZip yangaphambili yesiko...
Umthambo oPhezulu oMgangatho weClassic 100% weCotton Oversi...
Ukuzilolonga okuKhaphukhaphu ngokweSiko loMbala weBhloko yeMidlalo G...
Umgangatho oPhezulu oLukiweyo oLukiweyo ngokuKhawulezayo iZip ePheleleyo...
Umtya weOEM Umtya esinqeni weSide Strip Fitness Athleti...
siliqela loThengiso lobuchwephesha ukunxibelelana kakuhle nabathengi ngesiNgesi nge-imeyile nangefowuni.Kwaye sonke singabaqulunqi abaphezulu beempahla zezemidlalo kwaye siyazi iinkcukacha ze-garmen.
OEM & ODM UMyili
sinawo abethu abaqulunqi bamaphepha abanolwazi olungaphezulu kwe-10 leminyaka ye-OEM&ODM, kwaye sinobuchule kuyilo lweBrand edumileyo.
sineesampuli ezingaphezu kwe-500pcs ezahlukeneyo kwi-factory.High Quality Sports Fabric yi-SGS, uvavanyo lwe-GTT oluqinisekisiweyo njl
singumvelisi weempahla zemidlalo oqeqeshiweyo ngaphezu kweminyaka eyi-10 yamava.Ngo-2015 Saphumelela iSatifikethi se-BISC, ngo-2020 saphumelela iSitifiketi se-Intertek.Igubungela i-2000-3000 yemitha yesikwere kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-150 eTshayina.
Sineqela lobuchwephesha kunye elisebenzayo ukwenza iisampulu ngaphandle kweentsuku ezi-7-10, gcina zonke iisampulu kunye nazo zonke iimpahla ezininzi zibe kumgangatho olungileyo kunye neLogo elungileyo, umgca wothungo olungileyo.
Sineqela lobuchwephesha lokuhlola ukwenza i-100 yepesenti yokuhlola umgangatho ngamaxesha angama-6, ukuqinisekisa ukuba wonke umsonto ulungiswe ngononophelo kwaye yonke imilinganiselo inokwenziwa ngaphakathi kokunyamezela.
Eyona iBlukhwe ye-AIKA Yoga
Zingaphi iimpahla zeGym ozifunayo?
Yintoni yokunxiba ukusebenza ngaphakathi
Iindidi zeT-shirt Iiprinta
Iminqwenelo yeKrisimesi evela kwi-AIKA SPORTSWEAR